LIISKA NOOCYADA UGU WANAAGSAN EE DHIRTA TUFAAXA EE GOBOLKA MOSCOW - CLONE MACDANTA APPLE EE GOBOLKA MOSCOW
Qof ayaa qalabeysan kara orchard gaar ahiyada oo loo badalayo geeska loogu talagalay nasashada.
In la abuuro janno yar ee nafsad ahaaneed, geedo khudradeed oo khudradeed ayaa ku caawin doona - geedo tufaax ah oo tufaax ah, kuwaas oo metelaya dhirta dhirta gaarka ah.
Hadda waxaan tixgelinaynaa noocyada dhirta kuwaas oo sharaxaad ka ah ugu habboon beeritaanka degaannada magaalooyinka ku yaalo meel u dhow Moscow.
Geedka-Apple waa kolonovidnaya. Noocyada gobolka Moscow - qurxiyo malab qurux badan
Dunida horumarka iyo tiknoolajiyadda casriga ah weli ma taagna. Maalin kasta waa wax muuqda oo nagu wareegsan cusub iyo asalka. Tani waxay khuseysaa dhammaan qaybaha nolosheena. Waqti la isku halleyn karo iyo hawlo badani waxay xushmeeyaan xaaladaha gaarka ah ee jiritaanka. Qof kastaa wuxuu rabaa in uu meel udhowo meel u dhow isaga oo u roon sida ugu macquulsan oo ugu haboon nolosha. Waxaa laga yaabaa inuusan jirin cid, sababtoo ah nafta ma bilaabi doonto wax yar beerta.
Ka shaqeynta hawada cusub waxay ka caawisaa inay ka baxsato walwalka dhibta leh, dhibaatooyinka maalinlaha ah, intaad heleyso farxad badan oo aad ku buuxin kartid batariyeyaasha si aad u hesho guulo cusub. Maqaalkeena waxaan ka hadli doonaa sida ugu fudud ee suurtogalka ah, muddo dheer, si aad u hesho beer yar, inta ugu yar si firfircoon u isticmaal meel bannaan.
Wakhti dheer, saynisyahannadu way ku dhibtoodeen sidii loo heli lahaa geedo midho lehyaa qaadan doona meel bannaanlaakiin waxay ku siin doonaan ugu sareeyaa macquulka. Fikirka, fikirka iyo guuleystey. Waad ku mahadsan tahay munaasabadda qummanaanta, farxad ka timid dhammaan kuwa jacaylka ah, geedo kala duwan oo geedo ah ayaa loo duudduubay, kuwaas oo xataa maanta laga heli karo plomme, jeeriga, fershee, isteroberi, iyo geedo tufaax ah. Dhirta yaryar ee aadka u yaryar waxay si dhaqso ah u heleen nasiib ballaadhan oo beeraley ah oo adduunka ah
Maanta waxaan ka hadli doonaa noocyo badan oo ka mid ah geedaha khudradda aan caadiga ahayn - tufaax colon. Noocyo tufaax ah oo leh taajir iyo waxyaabo aan caadi ahayn oo gebi ahaanba u muuqday shil, sida Natiijada isbedelka dabiiciga ah.
Sanadkii 1960-kii, mid ka mid ah ninkii beerta ka shaqaynayay oo ka yimid Kanada, Vazhek gaar ah, wuxuu arkay laan ku yaal geedka tufaaxa ee Macintosh kala duwan oo aan la mid ahayn laan kale. Laankani wuu ka duwan yahay kuwa kale muuqaalkiisa. Mr. Vazhek wuxuu soo ururiyey burooyinkeeda, waxayna dooratay geedo kala duwan oo cusub. Sidaa darteed, kala duwanaanta Apple Macintosh Wazhek muuqday - waxay ahayd kala duwanaanta koollada horewuxuu u muuqday mid ka mid ah geedo waaweyn oo midho leh.
Horeba waa jira Noocyo badan oo kala duwan oo tufaax ah waa kolonovidnoy, laakiin waxaan rabnaa in aan ka hadalno noocyada ugu haboon ee koritaanka iyo horumarinta beeraha ee gobolka Mooska, sida aaggani ay u kala soocaan xaaladaha cimilada iyo cimilada qaarkood, taas oo u baahan hab gaar ah oo lagu dooranayo geedaha iyo dayactirka.
Doorka tooska ah ee geedku uu xidid u noqon doono xaafad kasta waxaa la cayaaraa midabada kala duwan ee noocyada kala duwan, oo ay ka mid yihiin, sida geedku u dulqaadanayo qabowga, kulaylka, cayayaanka iyo cudur, iyo sidoo kale sida ay midho u tahay xaaladaha qaarkood. Aynu sii degganaanno geedaha ugu haboon Xaaladaha gobolka Moscow.
Sharaxaadaha kala duwan
Waqtigeennaba, dalagyada miraha waxay nagu raaxeystaan ​​kala duwanaanshaha iyo tiradooda. Geedka tufaaxa ma aha wax ka duwan. Dhammaan beeraleydu waxay ogyihiin in ay jiraan noocyo badan oo tufaax ah oo adduunka ah. Waxay ku kala duwan yihiin dhadhanka iyo xajmiga miraha, daaqa iyo koritaanka.
Tusaale ahaan, marka loo eego xilliga daaqsinka, tufaaxu waxay u qaybsan yihiin saddex kooxood oo waaweyn. Waa noocyada xagaagaoo dalagyada beeraha dhexdooda siinaya, noocyada dayrta - bixinta goosashada xilliga dayrta oo dhan noocyada jiilaalka - kaas oo u dillaacsan xilliga dayrta oo la dhigo ilaa kulaylka xiga. Markaad si sax ah u qaybiso dhammaan saddexda nooc ee geedahan ku yaal beertaada, waxaad ku heli kartaa tufaax cusub guriga oo dhan sanadka oo dhan.
Ka mid ah noocyada ugu caansan ee geedaha tufaaxa columnon, ugu haboon ee sii kordhaya on xaafadaha Moscow waa: kala duwan Medok, Madaxweynaha, in uu u bislaado qeybtii labaad ee August; beeraha "Vasyugan", "Gin" iyo "Titania", oo u raraya xilliga dayrta; noocyada "Bolero", "Arbat", "Moscow Necklace", oo fadlan kala soo baxa miraha soodhaweysan oo awood u leh inay sii socdaan illaa February. Dhamaan noocyada liistada u dulqaadanayaan garoomada adag ee Ruushka, aad u adkaysata cudurada iyo cayayaanka, iyo sidoo kale bixiyaan goosashada wanaagsan.
Noocyada ugu wanaagsan gobolka Moscow: "Arbat", "Vasyugan", "Gin", "Titania", "Medoc", "Madaxweyne", "Moscow Necklace", "Bolero"
Waxaa habboon in la fiiriyo ninkii beerta ka shaqaynayay, marka laga reebo muuqaal aan caadi ahayn, noocyada kala duwan ee geedaha tufaaxa ee sababa, oo ay ugu wacan tahay qiyaasta yar ee geedkooda, ayaa si aad ah loogu isticmaalay horumarinta hiwaayadaha sida naqshada muuqaalka gaashaankiisa
Intaa waxaa dheer, waxaa habboon in la soo celiyo qaabdhismeed gaar ah dhirta geedaha geedaha tufaaxa ah ee naftooda, kuwaas oo ah kuwo aan caadi ahayn fahamkeena geed leh weel jireed - saldhig, iyo laamaha agagaarka ku wareegsan, oo leh meel dalag badan oo tufaax ah, oo u muuqday in ay ku dhajiyayso wareeg kasta oo bilaash ah. Inta lagu jiro muddada daaqa ee miraha, laamaha geedka waxay ku yaalliin cirka, si siman qaab dhismeedka qaab dhismeedka - tiirar, kuwaas oo ay ku siiyaan magacooda.
Wax qarsoodi ah maaha in tufaaxu uu ka mid yahay midhaha ugu caansan oo caafimaad leh, oo si fiican u caafimaad qaba. Dad aad u yar oo aan cunin tufaaxa. Midhaha miro badani waxay ka kooban tahay xaddi badan oo nafaqo iyo fitamiino, sidaas awgeed waxaa si weyn loo isticmaalaa diyaarinta miraha kala duwan ee miraha iyo casiirka. Laakiin waa in la ogaadaa, iyada oo ku xidhan noocyada kala duwan ee tufaaxa, dhadhanka iyo tayada miraha naftooda ayaa aad u kala duwan. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay inaad ogaato sifooyinka shakhsiyeed ee midhaha kala duwan.
Sharaxaada miraha waxay xaq u leeyihiin inay ku bilawdaan miraha kala duwan ee xagaaga: "Medoc" iyo "Madaxweyne." Miraha fasalka "Medoc" waxaa lagu kala soocaa midabka jaalaha ah ee la cadeeyay oo leh dhalaalid, macaan, dhadhan dhadhan. Miraha waxay leeyihiin qaab gudaha ah oo qaabeysan oo casri ah oo leh maqaar sare oo adag, oo miisaankeedu yahay 100 -250 garaam. Waxay ugu habboon yihiin caanaha iyo samaynta qalalan. Midhaha tayada leh ee "madaxweyne" kala duwan ayaa miisaankiisu yahay 140 - 250 garaam. Isla mar ahaantaana, midabka midabkiisu waa cirro, jaale-cagaaran oo leh midab ciriiri ah oo caan ah. Miraha leh hab joogto ah wareega iyo dhadhanka macaan-macaan, si fiican u dhirta dhogorta leh.
Variety "Vasyugan" wuxuu leeyahay miraha leh casaan cagaaran-cagaaran iyo sidoo kale qaab dhismeedka qurux badan oo casiir leh oo ka mid ah saxarka, macaan-macaan dhadhan. Inta badan ku habboon isticmaalka foomka cayriin.
Gaar ahaan "Gin" wuxuu leeyahay miro casaan oo leh miisaan gaaraya 200 oo garaam. Isla mar ahaantaana, miraha waxay leeyihiin dhadhan macaan iyo dhanaan leh iyo hilib aan caadi ah oo jilicsan.
Kala duwanaanshaha "Titania" wuxuu leeyahay miro yar oo casaan leh miisaan yar, oo ah 110 garaam. Miraha waxaa lagu sifeeyay khamri macaan oo macaan leh hilibka cad.
Bolter "Bolero" Waxay leedahay miro ballaaran, qiyaastii 200 garaam oo miisaan iyo caddaan ah, halkii saxarad adag oo badan oo casiir ah. Waxay leeyihiin maqaar sare oo cagaaran.
Kala sooc "Arbat" Waxay caan ku tahay miraha midabka jilicsan, oo leh miisaan ku saabsan 110 garaam, taas oo aan la kaydin muddo dheer, laakiin waa la wada baabbi'iyey cusub, qaabkeeda cayriin.
Dhexdhexaadiye "Moscow Necklace" Waxaa lagu kala saaraa miraha weyn ee qiyaastii 250 garaam mid kasta, iyo midab cas oo leh midab cas oo leh dhadhan aad u macaan iyo qaab-dhismeed qurux badan.
Sidaa awgeed, sida tufaaxa dhirta si fudud si fudud ayey u gudbinayaan isku dhufashada dhirta dhaqameed, taasi waxay kuu ogolaaneysaa inaad wacdo geedo gaar ah dhawr sano.
Hadda, isagoo garanaya muhiimada midhaha fasal kasta, waxay noqon doontaa mid sahlan in la go'aamiyo baahidooda shakhsiyeed.
Dhirta Colonoka waa mid aad u soo jiidasho iyo qurux badan dabiiciga ah. Sidaa darteed, waxay caan u yihiin ma aha oo kaliya geed geedo ah, waxaa sidoo kale loo isticmaalaa naqshadda muuqaalka. Sida ay yiraahdaan, ujeeddo wanaagsan, iyo habboon oo faa'iido leh.
Muuqaal muuqda oo ka mid ah geed kasta oo xiiran leh waa xayawaan adag oo leh internodes, kuwaas oo si weyn loo gaabiyey. Natiijada koritaanka noocan ah, caleemaha geedku waxay ku yaalaan meel aad u dhow midba midka kale, taas oo ka kooban tiir cagaaran, taas oo ah muuqaal qurux badan oo qurux badan.
Dharbooyin miro ah oo geedo ah ayaa lagu sameeyaa caleemaha laamaha gaaban ee gaaban. Taajashada isku dhafan waxaa abuura caleemo ka soo baxaya xagal ba'an oo ka soo jeeda garaafka weyn - tani waxay u oggolaaneysaa beeritaanka aadka u cufan ee geedaha qoraxda ee dhulka.
Iyadoo la tixgelinayo geedka tufaaxa qoryaha laftiisa, qaab dhismeedka gaarka ah ee qaab-dhismeedkiisa si degdeg ah ayuu u qabtaa isha. Geedka of this kala duwan ee aan lahayn hannaan taajir ah loo yaqaan si ay bannaanka u. Waxay ka kooban tahay asaas dhexe, qaro weyn oo daboolan leh digaagaha yaryar oo yar yar, oo ah dhinacyada ugu, kaas oo guga, inflorescences badan oo ubaxyada.
Later wixii macno ahaan ah daboolay miraha tufaaxa. Sababtoo ah qaab dhismeedka qaabdhismeedka geedka, waxay leedahay qiyaas yar oo dibadda ah, isla markaana waqti isku mid ah ayaa leh dhalid heer sare ah. Hanti noocaas ah oo ka mid ah geedaha mucjisada ah, waxay kuu ogolaaneysaa inaad beerta beertaada badan oo noocyo kala duwan oo tufaax ah, caleemaha, taas oo ah jidka, si gaar ah u koraan, oo tani waxay u qalantay magaca -Tufaax Kolonovidnye".
Calaamadaha isku midka ah ee geedaha waa kuwo aad u deggan, sidaa daraadeed ma ahan kuwa la isku gudbiyo daaqsinka dhaqameed ee dhaqameed. Maxaa u ogolaanaya dhowr sano si ay u helaan geedo iyaga u gaar ah geedahan, iyo si ay u si xor ah u beeran.
Iyadoo faa'iidada ugu weyn ee geedaha miraha ee tufaax qori mid ah waa in la xuso dhalidda gaar ah oo aad u sarreeya ee noocyada kuwan. Taasi waa, inkastoo cabbirka dibadda ee geed kasta oo tufaax colon ah, waxay siisaa dhalidda sare. Sidoo kale, qaab dhismeedka qaabka kor lagu sharxay wuxuu kuu ogolaanayaa inaad soo jiidato dalagyada dalagyada qaangaarka ah ee soo bandhigidda tabaha xayeysiinta leh ee jaranjariga ah oo dhab ahaan halis u ah ninkii beerta ka shaqaynayay, oo ku raaxeysta habdhaqan wanaagsan, isaga oo kuu oggolaanaya inaad ku raaxaysato natiijooyinka shaqadaada.
Dhirta midhaha leh waxay kala duwanyihiin noocyo kale iyadoo dhadhanka sare ee midhaha, taas oo suurtogal u ah inay isticmaalaan dhammaan hababka suurtogalka ah ee diyaarinta iyo goosashada miraha geedaha tufaaxa. Marka lagu daro guryaha kor ku xusan ee dhirta tufaaxa, waxaa suurtagal ah in la iloobo wixii ka soo horjeeda cimilada qaboobaha xiliga qaboobaha iyo difaaca adag ee cayayaanka iyo cudurrada kala duwan.
Dhammaan geedaha xayawaanku waxay sidoo kale yihiin noocyo qurux badan oo loogu talagalay xarun ama dekad qurxiyo leh oo aad abuuri karto dareen quruxsan ama walaac cajiib ah.
Haddii aad si faahfaahsan u fiirsato, markaas gebi ahaanba wax walba oo dhulka yaalaa waxay leeyihiin tayada wanaagsan iyo kuwa xunba - cilladaha loogu yeero. Laakiin, ka fiirsashada noocyada noocyada tufaaxa ah ee noocyada tufaaxa ah, waa inay qiimeeyaan xaqiiqda ah in sidaasi la sheegayo Dhibaatooyinka noocan ah ee geedaha tufaaxa iyo maya. Marka laga reebo aad u yar, sida baahida loo qabo bacriminta tayo sare leh, labadaba inta lagu jiro beerashada iyo daryeel dheeraad ah, iyo baahida aan loo baahnayn ee daryeel taxadar leh.
Waxa kale oo xiiso leh in la akhriyo noocyada tufaaxa ee Siberia.
Isku xirnaanta daryeelka
Dhammaan geedaha, gaar ahaan miro, wuxuu u baahan yahay jacayl iyo daryeel. Waa lagama maarmaan in la daryeelo geed kasta oo si hufan leh, oo ogaanaya isdhexgalka koritaanka iyo horumarkiisa.
Tilmaamaha daryeelka ee tufaaxa xayawaanka waa inay ku jiraan xaaladda xaalada khasabka ah ee caadiga ah qoyaanka ciidda u dhow geedahagaar ahaan ka dib markii lagu bedelay. Tani waxay tusinaysaa in labadii bilood ee hore ka dib markii laga beerto geedo, waxaa lagama maarmaan ah si loo hubiyo in ciidda agagaarka geed agtiisa agteeda uusan engegin, marmar qoyaan. Humidification soo saaro waraabiyo nidaamsan oo geedo sii kordhaya laba - saddex jeer toddobaadkii.
Intaa waxaa dheer, si loo ilaaliyo dhalinyarada, dhawaan dhirta la beeray, iyaga ku beeray iyaga oo doorbidaya xilliga qaboobaha oo ku yaal dabacad ama dabiici ah oo dabiici ah oo buuxsan balka, caleemo dhacday ama lakab xoog leh oo baraf ah. Tani ma waxyeelayn doonto geedka ilaa dhirta daran oo ka ilaalisa cayayaanka.
Ka hor inta jiilaalka, oo ah bisha Sebtembar, si loo hakiyo xilli sii kordhaya by jiilaalka iyo toosin miro ah ee geed si loo xoojiyo iyo diyaariso qaboobaha qabow, ka saar xaashadda ugu sareysa.
Sidaa darteed, manjooyin, tufaax qori ah looma baahna. Koritaankooda waxaa lagu fuliyaa hab dabiici ah oo leh muuqaal sanadle ah oo ka mid ah laanta dhinaca cusub ee qaybta ugu sarreeya ee geedka dhoobada. Gooyo waxaa loo samayn karaa oo keliya ujeedooyinka caafi-maadka si looga hortago taajkii dhirta ee dhagaha iyo dhagaxyada laamiyada, iyo sidoo kale in dib loo noolaado laanta ka dib 2-3 sano koritaanka, iyada oo la bixinayo tiro badan oo laamo ah.
Xilliga oo dhan xilliyada diiran ee geedaha u baahan yahay quudiyo Bacriminta Fosfat fosfate oo sameeya bishii. Waxaad dhajin kartaa tufaaxan adigoo isticmaalaya HOL, slurry iyo cusbada, laakiin tiro yar oo kaliya, si aanay u gubin geedka.
Sanadihii ugu dambeeyay ka dib markii la furo, tufaax qori ah, gaar ahaan jeexjeexa, wakhti dheer ayuu koraa, sida caarada nevyzrevshaya ee qaboobaha jiilaalka. Si looga fogaado tan, waa inaad isticmaashaa bacrimin bacriminta nitrogen waqti go'an iyo baabi'iyo waraabinta dhamaadka xagaaga.
Xaaladaha gaarka ah ee laga beerto geedo ay saameeyeen sifooyinka abuuritaanka geedka ee tufaax qori ah. Waqtiga ugu fiicneyn ee lagu beero geedo ka mid ah tufaaxa tiirarka waxaa loo tixgeliyaa daqiiqad marka aan ubbooyinku weli dhalin iyo xilliga firfircooni sii kordhaya ee aan bilaabmin, tanina badanaa waa guga hore.
Caano si ay u beeraan geed yar ha ahaado mid qoyan ama sabool ah nafaqooyinka. Ceelka for sapling gaar ah waa in ay ka mid ah size sida si ay u siiyaan xoriyad buuxda in xididdada seedling ah. Marka la gelinayo seedling daloolka, dhufashada xididada ama xiriirkooda leh derbiyada dalool beerto ayaa la oggol yahay. Goobta loo yaqaan 'seedling' waa inay ahaato mid ka sarraysa dhulka, xaqedda dalool beerto waxay ku shubaan ciidda qoday muddadii ay qashinayeen, isku qasan 4-6 kg of humus ama compost, waxayna ku xiran tahay waqtiga sanadka, waxaa lagu waraabiyaa xal daciif ah oo ah HOL biyo.
Ma noqon doonto mid macquul ah, ka dib dhammaadka geedi socodka beeritaanka seedling, si ay u qabtaan Mulching of aagga dunta dhulka dushiisa. Nidaamkani wuxuu badbaadin doonaa qoyaanka dhulka. Waxaa lagu sameeyaa caawimo ah noocyada kala duwan ee organic - tusaale, caws, caleemaha dhirta kale ama cirbadaha.
Marka la eego dhamaan sifooyinkaasi, waxaad adigu haysan kartaa dadaal gaar ah si aad u koriso qurux badan, midho leh, orchard. Waxa ugu muhiimsan - haddii aad daryeesho geed, waxay kuu mahadcelineysaa si deg deg ah jacaylkaaga iyo daryeelkaaga.